Manaova fialan-tsasatra ho azy miaraka amin'ny traikefa nahafinaritra tao Kildare
Zavatra 20 tsara indrindra hatao any Kildare
fianakaviana, mpivady, Ireo tia ny tantara, Mpitady Adventure, Fitsidihana voalohany, Zavatra tokony hatao
Ny Tatsinanana Fahiny dia tototry ny lohany sy ny vano hizaha azy, manomboka amin'ny dian'ny ala mahavariana, ka hatramin'ny trano fandraisam-bahiny mahafinaritra, misy aza ny golf tsara indrindra eto amin'ny firenena mba hampiharana ny fikororohana anao.
Kildare dia manan-javatra betsaka atolotra, koa maninona raha manampy vitsivitsy amin'ireo tolo-kevitray ho an'ny lisitry ny siny fijanonana!
Stud nasionaly sy zaridaina Irlanda
Stud Nasionaly Irlandey 2
Fantatra amin'ny anarana hoe Thoroughbred County, Kildare no trano mahavariana Stud Nasionaly Irlanda. Ilay toerana fiompiana soavaly any Tully dia tranon'ny sasany amin'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany ary mirehareha amin'ny zaridaina japoney tsara tarehy koa.
Mitady ny fientanam-po manarakao any Kildare? Mondello Park's nalamina ve ianao!
Fandaharana mampientanentana amin'ny hazakaza-piara sy môtô atao any Mondello isan-taona. Ho fanampin'izany dia misy Sekolin'ny Driving Racing izay ahafahan'ny olona mahazo fampianarana sy saram-pianarana. Mifandraisa amin'ny fizaran-tany raha mila antsipiriany.
Sakafo any Kildare Farm
Miaina ny tsara indrindra amin'ny fiainana any ambanivohitra Irlandey maimaim-poana, minitra vitsy monja ivelan'ny tanànan'i Kildare!
Sakafo any Kildare Farm manolotra mpitsidika traikefa an-tsaha misokatra ho an'ny fianakaviana, izay ahitanao ireo biby fiompy isan-karazany amin'ny toerana voajanahary sy milamina nefa tsy mandoa denaria iray akory.
Ny mpitsidika dia hankafy tontolo iainana mangina any ambanivohitra, ary afaka manararaotra ny fitsidihan'izy ireo amin'ny alàlan'ny famahanana ireo biby fiompy na fiandrasana sakafo matsiro ao amin'ny Farm Café.
Ataovy izay hampialana voly anao ny mpitsangatsangana kelinao amin'ny fitsangantsanganana amin'ny lakandranon'i Kildare miaraka aminy Fitsangatsanganana an-tsambo! Manomboka any Sallins, ireo sambo fitaterana lakandrano nentin'i Barge Trip dia mamakivaky ny ambanivohitra Kildare.
Azon'ny ankizy atao ny mijery ny mason'izy ireo hahazo biby dia eny amoron'ny morona toy ny kingfishers, dragonflies, gana, swans ary maro hafa. Ny kely dia hankafy ny fitsangatsanganana amin'ny rivotra madio, mandritra ny fotoana ianarany ny tantaran'ny lakandrano, sambo ary tetezana. Avelao any aoriak'izao tontolo izao ary miaingà amin'ny zava-miafina eny ambonin'ny rano!
Lullymore Heritage & Discovery Park dia mahasarika mpitsidika iray andro any amin'ny nosy mineraly ao amin'ny Bog of Allen ao amin'ny County Rathangan Kildare-toerana tonga lafatra hijerena ny lova Irlandey sy ny tontolo voajanahary.
Lullymore Heritage & Discovery Park koa no toerana fialamboly ho an'ny mpianakavy miaraka amin'ny faritra milalao fitsangantsanganana lehibe fitsangatsanganana an-tsokosoko golf goavam-be any afovoan-tany sy ny toeram-piompiana biby fiompy miaraka amin'ireo soavaly Falabella malaza-ity fifangaroana mahafinaritra sy fianarana lehibe ity dia mahatonga an'i Lullymore ho "tsy maintsy -see ”rehefa mitsidika an'i Kildare.
Fitsangantsanganana an-kilaometatra sy kilaometatra maro kilaometatra - tonga lafatra mba hitsoka ny ririnina ririnina amin'ny sokajin-taona rehetra! Any amin'ny avaratrandrefana Kildare, Donadea Forest Park dia ala 243 hekitara sy fifaliana madio.
Mihazakazaka mamaky ny ahitra ny fiaramanidina, mivezivezy eny amin'ny zaridaina misy rindrina ary mangatsiaka ao anaty trano misy ranomandry alohan'ny hamahanana ireo gana amin'ny farihy 2.3 hektara. Fiainana tsy misy famoretana amin'ny tsara indrindra. Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny tranokala National Heritage dia voatondro Eto.
Ny biby dia voa mafy amin'ny ankizy foana! Ary koa ny namana volo, Clonfert manana faritra filalaovana roa an-kalamanjana ihany koa miaraka amin'ny trano mimanda, faritra filalaovana anaty trano, go-kart, kianjan'ny baolina kitra, faritra piknikana maro hafa ary maro hafa hampialana voly ny fianakavianao.
Ento miaraka amin'ny toeram-piompiana misokatra ny zazakely hahafahan'izy ireo mifanena amin'ny biby sy hiaraka amin'ny olo-malaza mponina, Rizzo, Sandy ary Hector, ireo alpaka malaza!
Kildare dia tena manana izany rehetra izany - soavaly kilasy an'izao tontolo izao, trano mimanda irlandey taloha, ary mazava ho azy, fitsaboana amin'ny antsinjarany!
Vohitra Kildare dia latsaky ny adiny iray miala an'i Dublin miaraka amin'ny boutique 100 mahery amin'ny lamaody eran-tany sy ny marika homeware. Kildare Village dia manolotra tahiry hatramin'ny 60% amin'ny vidin'ny antsinjarany voatondro fito andro isan-kerinandro sy mandavantaona! Ka inona no andrasanao? Miantsena!
Tsy ho trangam-bokatra manodidina an'i Kildare izany raha tsy mitsangatsangana amin'ny lapa irlandey taloha!
Miorina amin'ny tantara, ny Leixlip Castle dia natsangana tamin'ny 1172 ary misy kojakoja fanaka fahagola, lamba famaohana, sary hosodoko ary sary ary zavatra tsy mahazatra toy ny tranon'ny saribakoly taonjato faha-18, sy maro hafa.
Ny trano mimanda koa dia tranon'ny trano fandraisam-bahiny gothic, ny seza ao amin'ny tempoly, ny gazebo ary ny tranon'ny vavahady.
Vetivety fotsiny ivelan'ny tanàna Rathangan dia misy ny tsiambaratelo nafenina tsara indrindra ho an'ny natiora! Killinthomas Wood any County Kildare dia toy ny zavatra mahitsy avy amin'ny angano ary izahay eto amin'ny Into Kildare dia mino fa io no iray amin'ireo ala mahavariana indrindra eran'i Irlandy!
Ny velaran-tany 200 hektara dia ala mikitroka mafy mifangaro miaraka amin'ny zavamaniry sy biby maro karazana. Misy manodidina ny 10 km ny diany vita sonia amin'ny ala ho an'ireo mpankafy fitsangantsanganana rehetra, ary manome fidirana amin'ny tontolo iainana isan-karazany izy ireo.
Lahatsoratra iray nozarain'i Keith Mahon - TheTaste.ie (@mrkeithmahon)
Ny Maze Kildare dia zavatra tokony hiainan'ny tsirairay! Ny maze fefy lehibe indrindra an'i Leinster dia manome andro iray mampihetsi-po sy mahafinaritra miaraka amin'ny fialamboly lamaody tsara ho an'ny fianakaviana amin'ny vidiny mirary. Avy amin'ny rivotra madio, ity dia toerana tsara ahafahan'ny fianakaviana mifaly isan'andro!
Ny maze fefy dia natsangana tamin'ny faran'ny taona 1990 ary nosokafana ho an'ny besinimaro tamin'ny taona 2000. Nanomboka teo dia nanatontosa programa lehibe iray ho an'ny fampandrosoana izy ity, nanampy zava-mahaliana vaovao hanomezana anao andro fialamboly mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa.
Ity toerana ity dia natao ho an'ireo mpikarokaroka kely sy mpizahatany lehibe, andro iray hankafizan'ny rehetra!
Mitadiava wallabies, vorondolo ary emus amin'ireo làlan'ny natiora sy ny fitsangatsanganana ala na hankafizanao ireo biby ao amin'ny faritra petting interactive - izany rehetra izany alohan'ny anaovanao ny mofonao sy ny fihinanana azy any amin'ny fivarotana kafe.
Ho an'ny 80 taona Volafotsy Newbridge dia namolavola sy nanamboatra latabatra misy kalitao ao amin'ny tranony fanamboarana any Newbridge, Co. Kildare Androany, ny mpanao asa tanana samy manana ny traikefa niainany dia mitohy manamboatra ny latabatra faran'izay tsara indrindra miaraka amin'ny fahaiza-manao sy fikarakarana feno fitiavana ankoatry ny firavaka sy ny fanomezana.
Ny Museum of Style Icons fidirana an-tsokosoko dia misy fanangonana lamaody sy zava-kanto izay an'ny sasany amin'ireo sary malaza indrindra amin'ny vanim-potoana maoderina toa an'i Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Princess Grace, Princess Diana, the Beatles ary maro hafa. Mandehana mitsangatsangana any amin'ny Ivotoerana mpitsidika mba hitsidika ny tranombakoka, haka sakafo atoandro ary hijery ireo tolotra manokana ao amin'ny magazay!
Mandosira ny mahazatra amin'ny andro iray amin'ny Lalao Redhills Adventure Kildare aterineto. Redhills Adventure dia miorina amin'ny toeram-piompiana efa niasa taloha, kilometatra vitsivitsy monja avy eo amin'ny tanàna Kildare, eo akaikin'ny M7 ary eo ambanin'ny 35 minitra miala ny rond point Red Cow. Manolotra mpitsidika andro iray feno hetsika miaraka amina karazana tsy mitovy amin'ny mahazatra, hetsika mahafinaritra ary azo antoka. Ny hetsika ataon'izy ireo dia fitsangatsanganana an-tsokosoko miorina amin'ny tany izay mety amin'ny ambaratonga sy ny fahalianana rehetra.
Misokatra mandritra ny taona rehetra izy ireo, ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady ho an'ny famandrihana vondrona mandritra ny valo na mihoatra ary afaka miditra ao am-pivoriana isam-bolana ny isam-bolana ka tsy mila vondrona ianao.
Castletwwn House Parklands
Ankafizo ireo valan-javaboary mahafinaritra ao Castletown. Tsy misy sarany fidirana an-tongotra sy hijerena ireo valan-javaboary. Tongasoa ny alika, saingy tsy maintsy tazomina amin'ny firaka ary tsy avela ao amin'ny farihy, satria misy fiompiana bibidia.
Andro iray ao amin'ny hazakazaka
Naas Pacecourse 5
Ny fitsidihana ny Thoroughbred County dia tsy ho feno raha tsy miaina andro firazanana amin'ny iray amin'ireo hazakazaka malaza eto an-tany. Ny hazakaza-tsoavaly any Kildare dia efa an-jato taonany maro, ary ireo toerana ireo dia tandindon'ny ampahany lehibe amin'ny ADN ao amin'ny distrika. Ny fientanam-po amin'ny hazakazaka dia tototry ny fomban-drazana, manome ny mpitsidika tsiro kolontsaina tena miavaka ka traikefa tsy azonao aleha amin'ny toeran-kafa. Ny distrika dia tranon'ny hazakazaka telo lehibe, Naas, Punchestown ary The Curragh, izay samy manolotra fivoriana sy hetsika mandritra ny fotoana feno. Mey dia mitondra ny festival Punchestown fanao isan-taona, hetsika avo lenta izay eo amin'ny lisitry ny siny tsirairay.
Ny ambanivohitra tsara tarehy any Co. Kildare no toerana mety indrindra amin'ny kianja filalaovana golf avo lenta, noho izany tsy mahagaga raha betsaka ny mifidy iray.
Ho an'ireo tia golf, ny fitsidihana an'i Kildare dia tsy ho feno raha tsy misy boribory (na roa!) Amin'ny iray amin'ireo taranja tompon-daka natolotry ny sasany amin'ireo mpilalao golf, toa an'i Arnold Palmer, Colin Montgomerie ary Mark O'Meara.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo toeram-pilalaovana golf ambony indrindra any Eropa, ny K Club Hotel & Golf Resort misy kintana dimy dia trano misy kianja golf roa mahafinaritra izay nandray ny tsara indrindra tamin'ireo mpilalao golf tamin'ny alàlan'ny tompon-daka maro, anisan'izany ny Ryder Cup tamin'ny 2006.
Trano tsy misy iray fa taranja golf tompon-daka roa, Carton House Golf no iray amin'ireo toerana golf malaza sy malaza indrindra any Irlanda. Any amin'ny 1,100 XNUMX hektara amin'ny valan-javaboary tsy miankina, ireo taranja ireo dia mahazo tombony amin'ny fomba fijery mahafinaritra, ala voajanahary ary ny atin'ny tranon'ny Palladian Manor House manan-tantara.
Miaraka amin'ny safidin'ny valan-javaboary na rohy anatiny, misy zavatra mifanaraka amin'ny karazana golf rehetra any Kildare. Mamandraha fotoana tee ary andramo ho an'ny tenanao.
Ny Royal Canal Greenway
Ny Royal Canal Greenway mahavariana dia 130km ny haavon'ny towpath, mety ho an'ny mpandeha an-tongotra, mpihazakazaka ary bisikileta amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny dingana rehetra. Manomboka amin'ny Maynooth cosmopolitan dia manaraka ny lakandrano 200 taona amin'ny alàlan'ny Enfield mahafinaritra ary Mullingar velona hatrany Cloondara any Longford, miaraka amin'ireo kafe, toerana fitsangantsanganana ary toerana manintona eny an-dalana. Ny tontolo ambanivohitra sy indostrialy dia mitambatra, miaraka amin'ny saha mihodinkodina, tanàna amoron-drano tsara tarehy, hidin-trano miasa ary marika famantarana manan-tantara. Mandeha bisikileta na mandehana eo anelanelan'ny tanàna lehibe ary miverena amin'ny lamasinina mankany amin'izay nanombohanao. Araho izay nalehan'ny sambofiara notarihin-tsoavaly taloha ary mitazà maso zava-mahatalanjona miafina miafina eny an-dalana.
Angano momba ny traikefa Kildare VR
Ny traikefa 3D immersive an'ny "Legends of Kildare" dia mampita ireo mpitsidika tamin'ny fotoana taloha mba hahita ny lova sy ny angano an'i Kildare taloha tamin'ny alàlan'ny tantaran'i St. Brigid sy Fionn Mac Cumhaill.
Amin'ny alàlan'ny torolàlana manokana an'ny medieval anao dia azonao atao ny mianatra ny tantaran'ireo tranokalan'i Kildare tamin'ny vanim-potoana nahitana an'izany ny Katedraly St. Brigid sy ny Round Tower ary ny Tempolin'i Fire taloha tamin'ny zava-misy virtoaly.
Ity fitsangatsanganana ity dia mitondra ny kanton'ny fitantarana tantara irlandey amin'ny lafiny iray vaovao, misambotra ny tantaram-pitiavana, ny herim-po ary ny zava-doza nitranga tamin'ny andro taloha tao Kildare izay nanako tao amin'ireo sisa tavela tamin'ny tranonay sy katedraly. Ny fitsangatsanganana dia fampidirana tonga lafatra an'i Kildare, izay manaitra ny filanao rehefa mitsidika ireo tranokalanay taloha ianao.
The Museum Shackleton
Ao amin'ny Trano Fivarotana taonjato faha-18 teo aloha, ny tranombakoka Shackleton dia manaraka ny fitrandrahana nataon'ny mpikaroka tany vaovao any Antartika Sir Ernest Shackleton. Ny fisongadinana dia misy sledge tany am-boalohany sy ny harness avy amin'ny diany Antarctic sy ny 15ft. maodelin'ny sambo Faharetana Shackleton ??
fianakavianampivadyIreo tia ny tantaraMpitady AdventureFitsidihana voalohanyZavatra tokony hatao